December 2020 - San Thitsa
Zawgyi တသတ်လုံး ” လေမဖြတ်စေရန် အတွက် ” တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဘဲဥပြုတ်ဆေးနည်း ဘဲဥကိုပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ။ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ်
ဗိုက်ခေါက်အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲကျချင်တယ်ဆိုသူများအတွက်ဆေးနည်းကောင်း
Zawgyi ဗိုက်ခေါက်အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ် ဆိုသူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်း ပါဝင်ပစ္စည်း များကတော့… သံပုရာသီး တစ္လုံး ဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့် နဲ့ ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့် ပထမဆုံး
Zawgyi ငွေကံပွင့်စေသော အစီအရင် မိမိနေအိမ်တွေ | ဆိုင်ခန်းတွေ မှာ အတိုက် အခိုက် အနှောင့်အယှက် ကင်း ပြီး ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် ချင်တယ် ဆို ရင် အနီရောင်ပြောင် ပိတ်စထဲ ကွမ်းရွက် ၁ရွက်ကျောက်ချဉ်
မိမိနေအိမ်ကို နမိတ်ကောင်း ဆောင်ယူစေရန် ပြုလုပ်သင့်သော အရာများ
Zawgyi မိမိနေအိမ်ကို နမိတ်ကောင်း ဆောင်ယူစေရန် ပြုလုပ်သင့်သော အရာများ “ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နှင့်၊ ဈေးသုံးလည်း မလွယ်နှင့် “ ဟူသော ဆိုရိုးစကား အတိုင်းပင်။ အချို့သော အယူအဆများသည် ပစ်ပယ်ထား၍ မရသလို၊ ဂရုမစိုက်မိသောကြောင့်
Zawgyi “တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ” တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် မိသားစုထဲသို့ မျိုးဆက်သစ်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ထားသောအလုပ်အကိုင်များလုပ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ပါ။ အရာရာ မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းလဲများစွာ ကြုံတွေ့ရပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းကြား ကူညီဖြေရှင်းမူများပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ မိမိအရမ်းယုံကြည်ရသူ မိမိအပေါ်လှည့်စားခြင်ခံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်များကောင်းသာပြောင်းလဲခြင်းဘက်တဖြေးဖြေးရောက်ရှိလာပါမယ်။ငွေကြေးဟာ ငွေရွှင်ပေမဲ့ စုမိဖို့တော့ အတ်ာခက်ခဲမယ့်နှစ်အပိုင်းခြားပါ။
လူတစ်ယောက် ကံညံ့ချိန် ကြုံရမယ့် မဖြစ်မနေကြုံရမယ့် အချက် ၅ ချက်
Zawgyi လူတစ်ယောက် ကံညံ့ချိန် ကြုံရမယ့် မဖြစ်မနေကြုံရမယ့် အချက် ၅ ချက် ၁. လူကြီးသူမရဲ့ ဆိုဆုံးမစကားတွေကို နားငြီးသလို ခံစားရလိမ့်မယ်။ ၂. မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း အတုအယောင်တွေကို စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလာတတ်ပါတယ် (ဥပမာဗျ ..အရင်ကအရက်သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့…ကံညံ့တော့မယ်ဆို ..အကြောင်းပြချက်မရှိ
Zawgyi “အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁-ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ” အင်္ဂါသားသမီးများယခုနှစ်အပိုင်းအခြားမှာ အလုပ်ကိုင်များ အလွဲလွဲမှားမှားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိုင်စီးပွားရေမှာလည်း မိမိ၏ဆန္ဒအတိုင်း ပြုလုပ်မှသာလျှင်အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်ပေါများသည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်းထမ်းများ အထက်လူကြီး၏ ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်းခံရပြီး လက်အောက်ငယ်သားအချင်းချင်း
Zawgyi ပိုက်ဆံစု နည်းဗျူဟာ ပိုက်ဆံစုတယ်ဆိုတာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပြီး ရေရှည်တည်ဆောက်ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ဝင်တယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လောက်စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေးယူတတ်ကြတယ်။ ဒါက အဓိက
“စနေသားသမီးများအတွက်၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁)နှစ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ”
Zawgyi “စနေသားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ ” စနေသားသမီးများ အလုပ်ကိစ္စများမှာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရခက်မှု မတင်မကျများစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။စိတ်မောလူပန်းပြီး လက်လွတ်ချင်စိတ်များပေါ်မည်|| စိတ်မညစ်ပါနဲ့အားအင်ထည့်ပြီး ဦးနှောက်ကို သေချာအသုံးချပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ယခုကာလမှာ အလုပ်အကိုင်များစတင်ဖို့
December 28, 2020 June 4, 2021 admin
Zawgyi ၂ ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် မနက်ဖြန်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ ကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ဒီယတြာကိုလုပ်ပါ မနက် ၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ယတြာ ကော်ဖီ ၃ခွက်ကို ပူပူနွေးနွေးလေးဖျော်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ကပ်လှုပါ